'सबै बेच्ने मात्र छन्, किन्ने उपभोक्ता कोही छैन,' मनकामना रियलस्टेटका न्यौपानेले भने।
उनका अनुसार कुन व्यक्ति कति ऋणमा परेको छ त्यसअनुसार घरजग्गाको मुल्य घटिरहेको छ। 'समस्या पर्नेले धेरै घटाएर दिएका छन्,' उनले भने। 'रिङरोड बाहिरको जग्गामा २ देखि ५ लाख रुपैयाँ प्रतिआनासम्म घटेको छ।'
इन्द्रेणी रियलस्टेटका महर्जनले पनि रिङरोडभित्र भन्दा पनि बाहिरको मुल्य बढी घटेको बताए।
पाँच ६ महिनाअघि प्रतिआना पाँच लाख रुपैयाँमा बेचेको जग्गा आजै (मंगलबार) तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ मुल्य राखेर पत्रिकामा विज्ञापन गरेको छु- कपन हाउजिङका अध्यक्ष उद्धवराज भट्टराई।
- गत वर्ष महिनाको दसौं लाख आम्दानी गरिरहेकामा दशै- तिहारपछि एक टुक्रा जमिन बेच्न सकेको छैन, अफिसको घरभाडा तिर्नसमेत समस्या भएको छ -इन्द्रेनी रियलस्टेटका अध्यक्ष राजकुमार महर्जन
- पुराना राम्रा (समयमै किस्ता र साँवा बुझाउने) ग्राहकलाई मात्र बैंकहरुले कर्जा दिएका छन्, नयाँ सबै बञ्चित छन् -मनकामना रियलस्टेटका अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने।
एक वर्षदेखि लगातार कारोबारमा आएको मन्दीले काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गाको मुल्य घटाउन थालेको यी उदाहरण हुन्।
२०५७ देखि रिङरोड बाहिरका क्षेत्रमा आवासीय रुपमा घरजग्गाको निर्माण उच्च भएको थियो। अहिले यसै क्षेत्रमा मुल्य बढी घटेको न्यौपाने बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो दिएको कर्जा असुलीमा जोड दिएका छन्। 'बैंकहरुले रियल स्टेटमा दिएको कर्जा अहिले नवीकरण गरेका छैनन्,' डेभेलपमेन्ट क्रेडिट बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने, 'लगानीभन्दा कर्जा असुलीमा जोड दिइएको छ।'
बैंकहरुको यो नीतिले कर्जा लिएका व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ। मुल्य जग्गा बेच्न नसकेको बेला कर्जा नविकरण नभएपछि साँवा बुझाउनु व्यवसायीले बाध्य भएर सस्तोमा जग्गा बेच्नु परेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले मात्र यो क्षेत्रमा करिव ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
व्यवसायीहरुका अनुसार जग्गाको बजार मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्दै आएका थिए।
दैनिक लिखत पास संख्या
डिल्लीबजार अहिले ५०-६० पहिले २ सयमाथि
चावहिल अहिले ७०-८० पहिले २ सयसम्म
कलंकी अहिले ३०-४० पहिले १ सय ५०माथि
भक्तपुर अहिले २५-३० पहिले १ सय ५० माथि
व्यवसायी भट्टराई पनि अहिले पैसा भएकाहरु समस्यामा परेकाहरुको सस्तोमा जग्गा किनिरहेको बताउँछन्। 'पहिले साढे तीन आनामा बनेको एक तले घरलाई ६५ लाख रुपैयाँमा नदिएकामा अहिले ५७ लाख मुल्यमा बेच्न खाज्दा पनि ग्राहक पाइएको छैन।'
घरजग्गा विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गाको मुल्यमा गिरावट आएको बताए। 'काठमाडौंमा ३० र ललितपुर, भक्तपुरमा २५ प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मुल्य घटेको छ,' घर तथा जग्गा विकास संघका सल्लाहकारसमेत रहेका
उनले मंगलबार नागरिकसँग भने 'व्यवसायीक क्षेत्र र आफै लगानी गरेकाहरुको मुल्य घटेको छैन, अरु सबै ठाउँमा घटेको छ।'
मालपोत कार्यालयहरुमा उठेको राजस्व र लिखत संख्यामा आएको गिरावटले पनि व्यवसायीहरुको भनाइलाई पुष्टि गरेको छ। गत वर्ष कात्तिकमा उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयहरुले ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकामा यो वर्ष कात्तिकमा ९ करोडमा झरेको छ। गत वर्ष दैनिक २ सयको हाराहारीमा हुने लिखत संख्या अहिले ५० मा झरेको छ।
'गत वर्ष दैनिक २ सयभन्दामाथि लिखत पास हुने गरेकामा अहिले ५०/६० मा झरेको छ,' सबैभन्दा महँगा मुल्य पर्ने जग्गा हेर्ने डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना भन्छन् 'राजस्व पनि यसै अनुसार घटेको छ।' उनले किनबेचमा आएको गिरावटले मुल्य पनि घटाएको बताए।
किन घट्यो मुल्य?
घरजग्गाको मुल्य अस्वभाविक रुपमा बढेर आर्थिक अवस्थामै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने संकेत देखा परेपछि सरकारले गत पुसमा पहिलो पटक नियन्त्रणमुखी नीति ल्याएको थियो। त्यसपछि एक वर्षमा सरकारले ल्याएका करिव आधा दर्जन नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार व्यावसायिक रुपबाट हुन छाडेपछि मूल्य घटन पुगेको हो।
राष्ट्र बैंकले गत पुसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घरजग्गा कारोबारको लगानीमा कडाइ गर्दै कुल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने नीति ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले चालु आबको मौद्रिक नीतिमार्फत यो व्यवस्थालाई झनै कडा बनाएको थियो। रियल स्टेटमा कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने नीति ल्याएपछि व्यवसायिक रुपबाट कारोबार संभव नदेखिएको हो।
यसले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसायिक रुपमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ।
घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याइ मुल्य घटाउन बेलाबेला अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका नीतिले पनि सहयोग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ५० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा बेच्दा हुने नाफामा पुँजिगत लाभकर लगाएको छ। यो व्यवस्थालाई चालु आबको बजेटले झनै कडा बनाइ ३० लाखको सीमामा झारेको छ। यसले व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ। कारोबारमा मन्दी आएका बेला करका कारण घरजग्गाको मुल्य बढाउनु पर्ने वाध्यता व्यवसायीलाई छ।
३० लाखभन्दा बढीको जग्गा र ५० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद गर्नेले अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने सरकारको अर्को व्यवस्थाले पनि कारोबारमा मन्दी आइ मुल्य घटन पुगेको हो। यो व्यवस्थाका कारण स्रोत खुलाउन नसक्नेले घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुल्यको घरजग्गा किन्दा अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि कारोबार र मुल्य घटाउन सहयोग गरेको हो।
एक वर्षमा छ वटा नीति
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीमध्ये जग्गामा २५ र हाउजिङमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने
- (९ महिनापछि ल्याइएको नीति) त्यसैमा क्रमशः १० र २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने
-तीस लाखभन्दा बढीको जग्गा र ५० लाखभन्दा बढीको घर खरिदमा अनिवार्य रुपमा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने।
- पचास लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदमा अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्र्ने।
- पचास लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदमा पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने।
- जग्गा पास गर्दाका दिन बैंकले धितो बन्धकी राख्न नपाउने
एकदम ठीक छ। जग्गाको भाउ घटाउनैपर्ने भएको छ।
एकदम ठीक, यस्तो नभए त समाजिक न्याय कसरी हुन्छ।
जे भइराछ एकदम ठीक भइराछ।
एकदम राम्रो। घरको मूल्य घट्नैपर्छ।
खुसीको खबर। घट्नैपर्छ।
एकदमै राम्रो समाचार हो।
दलालहरूले यसबाट केही कुरा सिक्न जरूरी छ।
धेरै राम्रो किनकि देशको प्रति व्यक्ति कमाई अनुसार नै जग्गाको मात्र होइन, सबै कुराको भाउ घट्नुपर्छ।
अनावश्यकरूपमा दलालहरूले बढाएको जग्गाको मूल्य घट्नैपर्छ।
Good news for middle class family.
ghatnai parchha ajai.......
Beacuse hard earned currency had been mis-used for the consumption purpose rather it would have supported some sort of productive purpose so that the today's children need not to go to deserts for their livings.